ANYA AGBAGHARA MGBE Ị NA-ARỤ ỌRỤ NA KỌMPỤTA, GWA M KA M GA - ESI ZERE ỊRỤ ỌRỤ? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
N'agbanyeghi n'eziokwu na narị afọ nke 21 abịawo - afọ nke nkà na ụzụ kọmputa, na enweghị kọmputa ma ọ bụghị n'ebe ahụ ma ọ bụghị ebe a, mmadụ apụghị ịnọdụ ya mgbe niile. Dị ka m maara, oculists na-atụ aro ka ịnọdụ ala karịa ihe elekere otu ụbọchị na PC ma ọ bụ TV. N'ezie, m ghọtara na ndị ọkà mmụta sayensị na-eduzi ha, wdg, mana maka ọtụtụ ndị ọrụ ha jikọtara na PC, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ime omume imezu ndụmọdụ a (mmemme, ndị na-edekọ akụkọ, webmasters, ndị na-emepụta ihe, wdg). Kedu ihe ha ga-enwe oge ime n'ime awa 1, mgbe ụbọchị ọrụ dị ma ọ dịkarịa ala 8 ?!
N'isiokwu a, m ga-ede ụfọdụ aro gbasara otu esi zere ịrụ ọrụ ma belata nsị anya. Ihe niile a ga-ede n'okpuru ebe a bụ naanị uche m (na abụghị m ọkachamara n'ógbè a!).
Ntị! Adịghị m dọkịta, n'eziokwu, achọghị m ịdere otu isiokwu na isiokwu a, mana enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara nke a. Tupu ige m ntị ma ọ bụ onye ọ bụla, ọ bụrụ na ị nwere ike gwụrụ mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, gaa ọkachamara anya maka nyocha. Ma eleghị anya, ị ga-edozi iko, tụlee ma ọ bụ ihe ọzọ ...
Nnukwu ndudue nke otutu ...
Echere m (ee, m chọpụtara nke a n'onwe m) na nnukwu mmejọ nke ọtụtụ ndị bụ na ha anaghị akwụsị mgbe ha na-arụ ọrụ na PC. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka ị dozie nsogbu - ebe a, mmadụ ga-anọnyere ya maka 2-3-4 awa ruo mgbe ọ kpebiri. Na mgbe ahụ, gaa nri ehihie, ma ọ bụ tii, mee ezumike, wdg.
Ya mere i nweghi ike ime! Ọ bụ otu ihe ị na-ekiri ihe nkiri, na-atụrụ ndụ ma nọrọ n'oche 3-5 na sofa site na TV (nyochaa). Anya, ọ bụ ezie na agbanyeghị, ọ dịghị ka ọ bụrụ na ị na-emepụta ma ọ bụ na-agụta data, tinye usoro n'ime Excel. N'okwu a, ibu dị na anya na-abawanye ọtụtụ ugboro! N'ihi ya, anya na-amalite ịgwụ ike ngwa ngwa.
Kedu ihe bụ ụzọ?
Ee, naanị nkeji iri anọ na ise. mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa ahụ, kwụsịtụ maka minit 10-15. (ọbụlagodi 5!). Ee Nkeji iri anọ gara, bilie, jee ije, lepụ anya na windo - minit 10 agafe, wee gaa n'ihu ọrụ. Na ọnọdụ a, anya agaghị agwụ ike.
Olee otú iji soro oge a?
Aghọtara m na mgbe ị na-arụ ọrụ ma na-enwe mmasị na ihe ọ bụla, ọ gaghị adị mfe mgbe niile iji soro oge ma ọ bụ tụlee ya. Ma ugbu a, e nwere ọtụtụ narị ihe omume maka ọrụ yiri nke a: ọtụtụ mkpuchi mkpuchi, oge ọkụ, wdg. M nwere ike ịkwado otu kachasị EyeDefender.
Ntugharị free nke na-arụ ọrụ na nsụgharị Windows ọ bụla, nzube bụ isi bụ igosipụta ihuenyo ntutu na oge ụfọdụ. Oge edozi oge iji aka, Ana m akwado ịtọ ntọala na 45min.-60min. (dị ka ị na-ahọrọ). Mgbe oge a gafere - usoro ihe omume ahụ ga-egosipụta "okooko osisi", n'agbanyeghị ihe ị bụ. N'izugbe, ịba uru dị mfe ma ọbụna ndị ọrụ nchịkwa ga-esiri gị ike ịghọta ya.
Site n'inwe oge izu ike dị n'etiti oge ọrụ, ị na-enyere anya gị aka izuike ma dọpụ uche (ma ọ bụghị naanị ha). N'ozuzu, ogologo oge ịnọ n'otu ebe adịghị emetụta akụkụ ndị ọzọ ...
N'ebe a, site na ụzọ, ịkwesịrị ịmepụta otu mmuo - otú "ntutu ihuenyo" pụtara, gosi na oge agafeela - ihe ọ bụla ị na-eme, kwụsị ọrụ (ya bụ ịchekwaa data ma mee ezumike). Ọtụtụ ndị na mbụ na-eme nke a, ma jiri ya rụọ ọrụ ngebichi na-emechi ya, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Otu esi eme ka anya gi kpuo ihu na nkwụsị a 10-15min.:
Ọ kacha mma ịpụ ma ọ bụ gaa na windo ma lee anya n'ebe dị anya. Mgbe ahụ, mgbe 20-30 sekọnd. sụgharịa ụfọdụ okooko osisi na windo (ma ọ bụ akara ochie na windo, ụfọdụ ụdị ọdịda, wdg), ya bụ. ọ bụghị ihe karịrị ọkara mita. Mgbe ahụ lee anya n'ebe dị anya, ya mere ọtụtụ ugboro. Mgbe ị na-ele anya n'ebe dị anya, gbalịa ịgụ ole alaka dị na osisi ma ọ bụ ole antenna nọ n'ụlọ ahụ (ma ọ bụ ihe ọzọ ...). Site n'ụzọ, site na mmega ahụ, a na-azụ ahụ ike, ọtụtụ ọbụna na-ekpochapụ iko;
Debekwuo oge (nke a metụtakwara oge ị nọ na PC). Mgbe ị na - amụcha - anya mmiri na - ele anya (ma eleghị anya, ị na - anụkarị banyere "ọrịa anya anya");
Mee mmegharị okirikiri na anya gị (ya bụ, lee elu, aka nri, aka ekpe, ala), ị nwekwara ike ime ha anya na-emechi;
Site n'ụzọ, ọ na-enye aka ịme ume ma belata ike ọgwụgwụ n'ozuzu, ụzọ dị mfe bụ ịsacha ihu gị na mmiri ọkụ;
Aro tụlee ma ọ bụ pụrụ iche. iko (e nwere ihe mgbasa ozi na "oghere" ma ọ bụ iko pụrụ iche) - Agaghị m. Ikwu eziokwu, anaghị m eji ya onwe m, ọkachamara nke ga-echebara mmeghachi omume gị na ihe kpatara ike ọgwụgwụ kwesịrị ịkwado ha (dịka ọmụmaatụ, enwere ahụike).
Okwu ole na ole gbasara ebe nyocha
Geekwa ntị na njedebe nke onwunwu, iche, mkpebi na oge ndị ọzọ nke nyocha gị. Ndi ha niile bu ezigbo ihe? Lezienụ anya na nchapụta: ọ bụrụ na ileba anya dị oke ọkụ, anya na-amalite ịgwụ ike ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị nwere nyocha CRT (ha dị oke ibu, abụba.) Ha dị mma 10-15 afọ gara aga, ọ bụ ezie na a na-eji ha eme ihe ugbu a) - lebara anya ugboro ugboro (Lee ugboro ole na ole na-ese onyinyo ahụ). N'ọnọdụ ọ bụla, ugboro ole kwesịrị ịdị n'okpuru 85 Hz., Ma ọ bụghị ya, anya ga-amalite ịgwụ ike ngwa ngwa site na ọkụ ọkụ mgbe niile (karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ezigbo ntụpọ).
Omuma nke CRT
A na-ekpochapụ ugboro ugboro, site n'ụzọ, na ntọala nke ọkwọ ụgbọala gị vidiyo (mgbe ụfọdụ a na-ezo aka dị ka mmelite ugboro ugboro).
Ihe di iche iche banyere imeputa ihe nyochaa:
Banyere ịmepụta ọkụ nwere ike ịgụ ebe a:
Banyere ịgbanwe agbanwe nyochaa:
Ịgbanwezi ihe nyocha ahụ ka anya ghara ịgwụ ike:
Ihe ikpeazụ m chọrọ inye ndụmọdụ. Otú ọ dị, ịgbaji bụ nke ọma. Ma ndokwa, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu, ụbọchị bu ọnụ - ya bụ. N'ozuzu, anọla na kọmputa maka otu ụbọchị. Gaa na ụlọ, gaa na ndị enyi gị, hichaa ụlọ, wdg.
Eleghi anya isiokwu a ga-adịrị onye mgbagwoju anya ma ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya, mana ma eleghị anya onye ga-enyere aka. M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ọbụlagodi maka onye ọ ga-aba uru. Ihe kacha mma!